प्रिन्ट संस्करण - कलिलैमा अवैध बाटो-किशोरकिशोरीका अमेरिका सपना - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कलिलैमा अवैध बाटो-किशोरकिशोरीका अमेरिका सपना
कार्तिक २०, २०७४-हवाई, जल र स्थलमार्ग भएर अवैध रूपमा अमेरिका पुग्नेमा किशोरकिशोरीसमेत रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकी सरकारले नै आफ्ना माइनर केन्द्र (बालबालिका राखिने स्थान) हरूमा किशोरकिशोरी रहेको जानकारी नेपाली दूतावासलाई दिएको छ ।
‘हो, अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेमा माइनर (कम उमेर) समेत परेपछि हामी थप गम्भीर भएका छौं । पहिले पनि जालो तोड्न हामीले मेहनत गरेका हांै तर सकिएको छैन, प्रयास जारी छ,’ अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्ज‘न कार्कीले कान्तिपुरसँग भने । उनले अमेरिकी सरकार र दक्षिण अमेरिकी सरकारको सहयोगबिना मानव तस्करीको जालो तोड्न सहज नरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अब यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकसँग छलफल अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
यस अलावा नेपालका दूतावास तथा सुरक्षा निकायबीच सहकार्यमा ध्यान जानुपर्ने पनि राजदूत कार्कीले बताए । नेपालीहरू तान्जानिया, केन्याबाट दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुक हँ‘दै मेक्सिको पुग्ने र त्यहाँबाट अमेरिका छिर्ने गरेका छन् । पानामा, निकारागुवा, होन्डुरस, कोलम्बियालगायत मुलुकका जेलमा पनि नेपाली खाली हुँदैनन् । नेपालीसँग अनुहार मिल्ने विदेशी पनि आफूलाई नेपाली भन्दै अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेका छन् । खास गरी भुटान, फिजी, मरिसस, भारत, मलेसिया, पाकिस्तान र बंगलादेशीमध्ये कतिपयले नेपाली राहदानी नै बोकेर आउने गरेको जानकारी दूतावाससँग छ । ‘कोस्टारिकामा पनि बालक रहेको जानकारी पाएको थिएँ । पछि छुटेको जानकारी आयो,’ राजदूत कार्कीले भने । कोस्टारिकामा निस्कने ‘अमेरिकन युजएक्सपेक्टो कोस्टारिका’ नामक पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा यस्तो तस्करीको सञ्जालमा अफ्रिकी, दक्षिण एसियाली र केही ब्राजिलियन नागरिक संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
नक्कली कागजात वा बिनाकागजपत्र यस्ता नेपाली त्यसतर्फ जाने हुनाले रोक्न र अध्ययन गर्न सहज भने छैन । नेपालबाट जन्मदर्ता मगाएर ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने गरेको पाइएको पनि दूतावासले उल्लेख गरेको छ । दूतावासमा मानिस उपस्थित नै नभई पासपोर्ट बन्ने कारणले पनि समस्या रहेको हो । कागजात पठाएकै भरमा राहदानी बनाउने प्रक्रिया आफंैमा ‘शंकास्पद’ भएको र यसमा कर्मचारी र उनीहरूका नातेदारको मिलेमतो भएको हुन सक्ने अनुमान केही परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ । यसलाई प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय नै असहयोगी बनेको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपालबाट नागरिकता नै लिएको व्यक्ति भए पनि दुई वर्ष अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिकामा माइनर (बालबालिका समूह) हुन्छन् । १८ वर्ष नकटी अमेरिकाले उनीहरूलाई युवाको वर्गमा राख्दैन । मानव तस्करहरूले सुरुमा २०/२५ लाख लाग्ने जानकारी दिए पनि ५० लाखभन्दा बढी रकम लाग्ने गरेको अमेरिका पुगेका बालबालिकाले समेत स्विकार्ने गरेका छन् । यो विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकाय सबै जानकार रहे पनि रोक्न कतैबाट प्रयास भएको देखिँदैन ।
‘तपाईंहरू समाचार त लेख्नुहुन्छ । पढ्छन् पनि, तर यसमा थप अध्ययन गर्दैनन् । गर्न खोजे रोकिदिन्छन् । यो ठूलो सञ्जाल छ । यसैले मानव तस्करी रोकिएको छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘सजिलै रकम कमाउने यो जालोलाई तोड्न कठिन छैन, तर कोही चाहँदैनन् ।’ वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले राहदानी बनाउन सम्बन्धित व्यक्ति नै आउनुपर्ने नियम बनाए पनि कतिपयले साथीकामा गएर डकुमेन्ट पठाउने हुनाले यस्ताका हकमा पासपोर्ट बनेको हुन सक्ने आशंका उनीहरूकै छ । मानव तस्करको पछि लागेर २३ महिनासम्म समय लगाएर अमेरिका छिरेको हुनाले उनीहरूप्रति सहानुभूति राख्दा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘सामान्य पढेलेखेका बालबालिकादेखि स्नातकोत्तर गरेकासम्मले अमेरिका आउन त्यस्तो बाटो रोज्नु आफंैमा दु:खद हो । यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।
किन सरे यादव सप्तरी ? ›